डिजिटल समाज र यसको प्रभाव
संसारभरि तहल्का मच्चाएको कोरोना भाइरसको कहरले जति जनाको ज्यान लिए पनि, लकडाउनले जतिसुकै घरभित्र बन्द गरेर राखे पनि हामी मानव समाजभन्दा बाहिर हुन सक्दैनौं । अहिलेको समाज सोसल मिडिया र डिजिटल जीवनशैलीले घेरिएको समाज हो ।
अहिले टिकटक, फेसबुक, ट्वीटर, इस्टाग्राम, भाइबर, गुगल, युट्युब, पब्जी, इमेल थाहा छैन भने ऊ यो नयाँ पुस्ताको समाजबाट निकै टाढा छ भनेर बुझे हुन्छ । अहिले हामी अघोषित रूपमा ‘डिजिटल लाइफ’ मात्र होइन ‘डिजिटल समाज’मा पनि छौं । यो समाजमा पकड युवा वर्गको रहेको छ ।
हिजो कुनै वेला नारीलाई घरभित्रै बस्नुपर्छ, घुम्टो ओढेर बस्नुपर्छ, सार्वजनिक ठाउँमा जहाँ पायो त्यहाँ जानुहुन्न भन्ने समाज थियो । शिक्षाको क्रान्तिसँगै के पुरुष, के नारी, के दलित, के पिछडिएका वर्ग, के अल्पसंख्यक ती सबैले शिक्षा प्राप्त गर्दै गए । जागिर गर्ने, व्यापार गर्ने, घुम्ने, पिकनिक गर्ने स्वतन्त्र समाजको विकास हुँदै गयो । एकात्मक परिवार र जातीय व्यवस्थालाई अधिनायकवाद, जातिवाद र निरङ्कुश भनी खुला अर्थ व्यवस्था हुने प्रजातन्त्र अथवा सबै मानिसको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने साम्यवादी जनवादभन्दा माथि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृति र व्यापार, ग्लोबल भिलेज, विश्व भ्रमण, ह्युमिनिटी, फ्रील्यान्सर, इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ शैलीका समाज देखिएका छन् ।
कुनै वेला कुनै केटी मान्छेको २/३ जना पुरुष साथी छन् भन्यो भने मात्र पनि विवाह कसले गर्ला भन्ने समय थियो । अहिले ‘एक्स ब्वायफ्रेन्ड’को कुरा गरेन भने ‘कन्जरभेटिभ’को ट्याग लाग्ला कि भनेर सोच्ने वेला आएको छ । विगत १५ वर्षयता इन्टरनेट, मोबाइल, भिडियो गेममा हुर्केका अनि स्कूल, कलेज र घर मात्र आउने–जाने भएका युवा पुस्तामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हाबी देखिन्छ भने गाउँघरको चौतारीमा बसेर तास, लुडो, क्यारम बोर्डमा हुर्केका अघिल्लो पुस्ता जो सांस्कृतिक चाडपर्वमा आ-आफ्नो समुदाय र टोलमा जिउँदाको जन्ती अनि मर्दाको मलामी भनेर हुर्किए, उनीहरू पछिल्लो पिंढीभन्दा निकै परिवर्तित छन् ।
अचेल टिकटक, फेसबुक सबैतिर भाइरल हुने फेसन नै चलेको छ । लाइभ आउँदा जोसँग पनि बोल्न र कुरा गर्न पाउने ! चित्त बुझे बोल्ने, मनलाग्दी लेख्ने, मन नपरे ब्लक गर्ने, क्या मज्जा ! कहीं कतै केही भयो, भिडियो हालिदिने, पोस्ट गर्ने तर त्यो सबै डिजिटल हुने ! व्यवहारमा कहिल्यै काम नगरेको होस् तर भिडियोमा काम गरेको राखिदिने ! अनि अचेल सबैलाई नाच्नुपर्ने ! सबै कलाकार, सबै गीतकार ! आहा, कति स्वतन्त्रता ! मैले फलानाको भिडियोमा यस्तो लेखें, लाइभमा यस्तो गरें, म यति भाइरल, क्या मज्जा आयो !
उहिले हजुरबा, हजुरआमाको जमानामा गरगहना, सारी, लुगाफाटो देखाउन विवाह, पूजाआजा, चाडपर्व आदि कुर्नुपर्थ्यो भने अहिले टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राममा राखेको देखिन्छ । समय परिवर्तनशील छ । शायद भोलि यो भन्दा अर्को प्रविधिले जीवनशैलीलाई अझ अर्कैतिर मोड्न पनि सक्छ !
मानिस र समाजको सम्बन्ध
मानिसलाई सामाजिक प्राणी उसै भनिएको होइन । मानिसलाई साथीभाइ, परिवार, इस्टमित्र, घनिष्ट मित्र, हाइ–हेल्लोवाला मित्र, काम लाग्ने साथी, त्यो पनि फरक–फरक समय र अवस्थामा फरक–फरकखाले काम लाग्ने साथीसंगी चाहिन्छ । कुनै समस्या परेमा एक्लै समाधान गर्न सकिन्नँ । परिवारबाट मात्र पनि नहुन सक्छ । त्यसैले; जटिलखाले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दाहरू समाजबाटै समाधान हुन्छन् । केही गलत गर्‍यो समाजमा कसरी मुख देखाउने ! र, केही राम्रो गर्‍यो भने समाजले राम्रो ठान्छ; इज्जत गर्छ भनेर गर्व गर्नु यी सबै सामाजिक बन्धन हुन् । इज्जत, प्रतिष्ठा, समृद्धि, मान–सम्मान, राम्रो बन्नुपर्ने, सभ्य बन्नुपर्ने लगायतका तत्त्वहरू समाजका गहना हुन् ।
कोही मानिस कति सामाजिक छ भन्नको लागि ऊ आफू बसेको समाजसँग कत्तिको घुलमिल छ, व्यक्तिगत स्वभाव कत्तिको मिजासिलो छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मानिसको स्वभाव अन्तर्मुखी र बहुमुखी हुन्छ । कोही सृजनशील हुन्छन् भने कोही शान्त अनि कोही उद्दण्ड पनि हुन्छन् । सबैसँग सहयोगको भावना राख्ने, समूहमा बस्ने अथवा एकल जीवनशैली मन पराउने थरीथरी स्वभावका मानिसहरू हुन्छन् ।
सामान्यतया युवावस्था भनेको सिक्ने र बुझ्ने वेला हो । हामीले जस्तो दिशानिर्देश दिन सक्छौं, जस्तो वातावरण तयार गर्न सक्छौं उनीहरूको जीवनशैली र काम गर्ने क्षमता पनि त्यस्तै हुन्छ । प्राय: युवा पुस्तामा ‘मपाईं’ मानसिकता देखिनुलाई सामान्य मान्न सकिन्छ किनकि यो उमेर नै त्यस्तै हो । तर, यो मानसिकता प्रौढ अनि वृद्धावस्थामा पनि देखिन्छ भने अस्वाभाविक हो । यस्तो कुरा समाजमा अपाच्य हुन सक्छ । तसर्थ; यस्ता कुराबाट छुटकारा पाउन युवावस्थामा नै सही दिशानिर्देश र उचित वातावरण दिइनुपर्छ ।
उहिले डिजिटल समाज नहुँदा यस्तो ‘मपाईं’ गर्नेलाई छर–छिमेक र साथीभाइले भेला, चाड-पर्व र जात्राहरूमा एक्लै पारिदिन्थे । संयुक्त परिवार हुने भएकोले घरका अन्य सदस्यले तिमीले यस्तो गर्नुपर्छ, किन त्यस्तो गलत गरेको भनेर सम्झाउने/बुझाउने चलन थियो । बच्चालाई तह लगाउन र सिकाउन आफ्नो नातेदारकोमा पठाउने, अर्म-पर्मको काममा पठाउने, सामूहिक भोज–भतेर अनि मन्दिरमा परिवारसहित जाने चलन थियो । त्यो एक प्रकारले हेर्दा सामान्य तर व्यावहारिक नैतिक शिक्षाको विशेष सिकाइ हुने गर्थ्यो । समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिमले व्याख्या गरेझैं त्यो मेकानिकल सोलिडारिटी थियो जहाँ सोसल बन्ड अर्थात् सामाजिक बन्धन थियो । समाजशास्त्री त्रविस हिर्चीले भनेझैं मानिस–मानिसका बीच एक प्रकारको भावनात्मक सम्बन्ध र धेरै कुराहरूको समान आस्था अनि विश्वास हुनेगर्थ्यो ।
कुनै वेला कुनै केटी मान्छेको २/३ जना पुरुष साथी छन् भन्यो भने मात्र पनि विवाह कसले गर्ला भन्ने समय थियो । अहिले ‘एक्स ब्वायफ्रेन्ड’को कुरा गरेन भने ‘कन्जरभेटिभ’को ट्याग लाग्ला कि भनेर सोच्ने वेला आएको छ ।
अहिले डिजिटल समाज तथा एकल परिवारमा हुर्केका बच्चाहरूमा एकलकाँटे (‘मपाईं’) प्रवृत्ति हाबी भएको छ । यसको कारण हो– डिजिटल लाइफमा रमाउने, खेल्ने, डिजिटल साथीसंगीको लाइक, लभ रियाक्ट र कमेन्टमै खुशी हुने । जर्ज सिमलले व्याख्या गरेझैं ‘ब्लाजे एटिट्युड’को चरम विन्दुमा पुग्दा मानिस वस्तु (Object) मा यसरी भिजेको हुन्छ कि रुँदा, हाँस्दा, रिस, माया, इर्ष्या लगायतका व्यवहारहरू वस्तुमाथि देखाउने गर्दछ । अहिले त्यो वस्तु इन्टरनेटको एप्स, गेम, मोबाइल, कम्प्युटर, गाडी, खेलौना हुन खोजेको देखिन्छ । यस्तोमा साथी पनि सोसल मिडियाबाट, आफन्त पनि सोसल मिडियाबाट, सम्बन्ध पनि सोसल मिडियाबाट र अझ केहीको त विवाह पनि सोसल मिडियाबाट भएको छ ।
यसरी सम्बन्धमा आउने पनि वस्तुझैं भएको छ । वस्तुले विपरीत प्रतिक्रिया गर्दैन तर डिजिटल समाजको अर्को पात्र पनि मानव नै हो उसले प्रतिक्रिया गर्छ । यो हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ । मुख्यत: ठूलो शहरी संस्कृति र व्यस्त आमाबुवाका सन्तानमा देखिने यो प्रवृत्ति इन्टरनेटको माध्यमबाट घर–गाउँ र गृहिणीसम्म पुगेको छ । डिजिटल समाजमा यिनीहरूलाई कसैले केही भन्न नसक्ने देखिन्छ । सोध्न र सम्झाउन अघिल्लो पुस्ता सक्षम देखिन्न किनभने यो पुस्ता डिजिटल समाजमा खासै पुग्न सकेको छैन ।
सोसल मिडियाको असर र सामाजिक जिम्मेवारी
मानिस धेरै समय सोसल मिडियामा रमाएर बस्दा उसको साथी भनेको नै पब्जी खेल्ने साथी, लाइक/कमेन्ट गर्ने साथी, लभ रियाक्ट गर्ने साथी अनि चित्त बुझे च्याट र नबुझे ब्लक गर्ने डिजिटल साथी नै हुन् । यस्तोखालको जीवनशैली भएको छ । म कस्तो छु, कत्तिको राम्रो वा राम्री अनि सुहाएको छ भनेर बुझ्नलाई टिकटकमा भिडियो हालेर, फेसबुकमा पोस्ट गरेर स्वमूल्यांकन गर्ने जीवनशैली बढेको छ । मैले केही बिगारे मलाई कसले के गर्छ, यो मेरो लाइफ हो भन्ने बुझाइ छ । कुनै युवायुवतीले फलानाको कति कमेन्ट, फलानाको कति लाइक भनेर आफ्नो साथी कुन लेवलको छ भनेर मूल्यांकन गरी साथी बनाउने गरेको पाइएको छ ।
वल्लो घर र पल्लो घरमा कसैलाई केही भयो– दयाट इज नट माइ प्रब्लम ।
सरकार भनेको के हो– पोलिटिक्स इज डर्टी गेम ।
फलानाले यस्तो गर्नुपर्ने त्यस्तो हुनुपर्ने– दयाट इज नन अफ माइ बिजिनेस ।
प्रधानमन्त्रीको नाम के हो– थाहा छैन ।
कर्णाली जस्ता पिछडिएको क्षेत्रमा भोलेन्टियर जब गर्नु जरुरी छ– कर्णाली कता पर्छ उफ् !
नेपालको विकासको अवस्था कस्तो छ– म के गरुँ, नेताहरू सबै चोर भएपछि !
यस्ता असंख्य उत्तरहरू अहिलेको युवा वर्गको मुखमा झुन्डिन्छ । मानौं; यी कुराहरूको कक्षा कतै हुन्छ । तर जिम्मेवार कसरी बन्ने, त्यसको कार्यदिशा र कार्यक्रम के हुनसक्ला न सरकारसँग व्यवस्था छ न त अभिभावकसँग नै !
डिजिटल लाइफको सफलता र विकृति
अहिले इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालका कारण करोडौं मानिस घरमै बस्न सकेका छन् । कुनै पनि ज्ञानबर्द्धक कुराहरू गुगल र युट्युबबाट बुझ्न अनि शिक्षा लिन सकिरहेका छन् । संसारभरि एकैछिनमा कुराकानी गर्न, विचार राख्न मिलेको छ । अल्बर्ट आइन्सटाइनको परमाणुको स्पीडभन्दा छिटो संसारको एक कुनाबाट अर्को कुनामा जानकारी पाउन सकिने भएको छ ।
यति हुँदाहुँदै; यो डिजिटल समाज विकृतिविना कहाँ बँचेको छ र ! भाइरल हुने निहुँमा शरीरमा के–कति लुगा लगाउनुपर्छ, सार्वजनिक स्थलमा के बोल्न हुने के नहुने बिर्सिन लागेका छन् मानिसले ।
“अस्ति टिकटकमा एउटीले ब्रा देखाएकोले उसको ५ हजार लाइक र एक हजार कमेन्ट आयो । अनि मैले पनि पेन्टी देखाएको त मेरो पनि रातारात १० हजार लाइक र २ हजार कमेन्ट आयो । अहिले त मलाई कलेज जाँदा सबैले हेर्छन् र बोल्न खोज्छन् बरै ! म कोसँग लभ गर्ने कन्फ्युज भएँ” भन्ने जमात पनि ह्वात्तै बढेको छ ।
अर्काथरी युवा वियर खाएको, शरीर मालिस गरेको आदि सोसल मिडियामा मुख्यत: टिकटकमा राख्दैछन् । यदि यसरी नै चलिराख्यो भने आउने २/४ वर्षमा मैले नुहाएको, मैले ट्वाइलेट गरेको, मैले यो गरेको, त्यो गरेको, अनि मेरो जीएफ/बीएफसँग यस्तो गरेको भनेर कसैले भिडियो राख्यो भने अचम्म नमाने हुन्छ । उनीहरू डिजिटल लाइफ र अभिभावकविहीन दुनियाँमै रमाएका छन् ।
नेपालमा ‘साइबर ल’ त्यति कडा र प्रभावकारी नहुनुले पनि होला भन्ने केही छन् । भारतमा अर्थतन्त्रमा घाटा लाग्यो वा चाइनासँगको सम्बन्धको कारण भनेर टिकटक बन्द छ । उता अमेरिकामा पनि त्यस्तै छ । चाइनामा भने युट्युब, गुगल, फेसबुकहरू निकै नै फिल्टर गरेर मात्र उपलब्ध गराइएको छ । गल्फमा पनि टिकटक र सोसल मिडिया निकै नै सेन्सर र लिमिटेड रूपमा रहेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र र व्यापार घाटा
नेपाल विश्वमा सानो अर्थतन्त्र भएको देश हो, जहाँ बर्सेनि लगभग ९२% व्यापार घाटा रहेको छ । खर्बौं रुपैयाँको मालवस्तु आयात (Import ) गरेर हाम्रो देशको गुजारा चलेको छ । विशेषगरी डिजेल, पेट्रोल जस्ता भौतिक मालवस्तुसँगै हामीले अर्बौं रुपैयाँका डिजिटल सामान र त्यसलाई प्रयोग गर्ने डिभाइसको लागि पैसा तिरिरहेका छौं । जस्तै; टिकटक, फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम र अन्य सोसल मिडियाको प्रयोग गरेबापत हामीले ती पैसा तिरिरहेका छौं ।
एक तथ्यांकअनुसार एनसेलले नेपाल सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व तिर्न बाँकी छ भनिन्छ । हामीले खर्बौं रुपैयाँको डिजिटल समाजमा खर्च गर्दा खाडीलगायत अन्य देशमा हाम्रा परिवारले कमाएको रकम यस्ता कुरामा खर्च गरी फेरि देश बाहिर नै पठाइरहेका छौं । देशको निर्यात (Export) कछुवाको चालमा छ । उद्योग, कल–कारखाना अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि खुल्न र राज्यले त्यसको वातावरण बनाउन सकेको छैन । यी डिजिटल समाजका युवा पात्रहरूको लागि सरकारसँग कुनै ठोस योजना छैन । सफ्टवेयर उद्योग र मोबाइल गेम/एप्स बनाउने उद्योगको वातावरण सरकारले दिन सकेन । गत वर्ष मात्र ३२ अर्ब बढीको मोबाइल, ग्याजेट नेपालीले खरिद गरे ।
डिजिटल समाजबाट सिकाइ
समाज परिवर्तनशील हुन्छ । हिजो जे थियो त्यो आज छैन र आज जे छ त्यो भोलि नहुन सक्छ । समाज भनेको नै हाम्रो समुदायको विशाल ठाउँ हो । यहाँ गरिब पनि हुन्छन्, धनी पनि हुन्छन् । शिक्षित पनि हुन्छन् र अशिक्षित पनि । प्रकृति विशाल छ, त्यो भन्दा विशाल मानव समाज छ । किनकि; प्रत्येक मानिसको सोच–विचार फरक छ, क्षमता फरक छ जसले गर्दा विकासको मामिलामा छिनछिनमै परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ ।
सूचना प्रविधिको विकाससँगै अहिले करोडौं नेपाली युवापुस्ताहरू सोसल मिडियामा झुम्मिएका छन् । तिनीहरू बहुसंख्यक बेरोजगार, हाउस वाइफ, विद्यार्थी छन् । तिनीहरू अवसरको पर्खाइमा छन् । सही शिक्षाको खाँचोमा छन् । कतिलाई त यो पनि थाह छैन कि– यसरी करोडौं रुपैयाँ डिजिटल लाइफमा रमाइलोका लागि खर्च गर्नु भनेको थोर्सटाइन वेल्बेटले Consumerism Culture मा भनेझैं उपभोक्तामुखी संस्कृतिकै आधुनिकीकरण हो ।
युवा वर्ग जो यसरी घण्टौंसम्म सोसल मिडिया अथवा डिजिटल समाजमा डुबेका छन् यिनीहरूले चाहेमा सरकारलाई सही बाटो देखाउन सक्छन् । इलेक्ट्रोनिक भोटको प्रणाली होस् त देशले युवा पुस्तालाई बुझ्ने, हाँक्ने नयाँ नेतृत्व पाउन सक्छ । बुढा नेताहरूको फोहोरी राजनीतिभन्दा इमान्दार युवा पुस्ताका नेता पाउन सक्छ, नर्वे, क्यानडा, डेनमार्कझैं वा पञ्चायतीकालमा सूर्यबहादुर थापाझैं । युवाले नेतृत्व गरेको डिजिटल समाजलाई विकासमा ढाल्ने समाज पाउन सक्छ ।
डिजिटल समाजका युवा वर्गलाई प्रश्न
कोरोनाले असाध्य पीडा दिएको भन्दा बढी यो देशको सरकारी संयन्त्र र सरकारी प्रणालीले जनतालाई केही गर्न नसकेको पीडा अझ ठूलो छ भनेर कहिले बुझ्ने ? यी बिन्दास डिजिटल युवा नै भविष्यका कर्णधार हुन् । यसरी ‘मपाईं’ गरेर, जे मन लाग्यो त्यही पोस्ट गरेर, भिडियो बनाएर घण्टौंघण्टा डिजिटल लाइफमा रमाएका पुस्ताले भोलिका दिनमा देश हाँक्नुपर्ने हुनसक्छ । जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
घोकन्ते विद्या र व्यावहारिक शिक्षाबीचको फरक, प्राविधिक शिक्षा र अप्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तालिम, ग्रामीण लघुवित्तबाट निर्मित ठूला उद्यमको बारेमा कहिले सोच्ने ? नेपाल जस्तो गरिब देशको अस्पतालमा हुने खर्च युरोप र अमेरिकामा हुनेभन्दा किन महँगो ? यहाँका संस्थागत (Private) क्याम्पस र स्कूलहरूको फी किन यति महँगो ? राज्यको नीति, निर्देशन र विकासका योजनामा हामी कहाँ छौं, कहिले बुझ्ने ? प्रत्येक कुरामा राजनीतिक दलको छाप, प्रत्येक काम गर्दा राजनीतिक दलको सिफारिस किन हुनपरेको भन्ने जिज्ञासा कहिले गर्ने ?
प्रधानमन्त्री र मन्त्री अनि राष्ट्रसेवक उच्च पदका कर्मचारीले देशको लागि के गरिरहेका छन् ? कसरी गर्दा राम्रो हुनेथियो त्यसको विचार कहाँ राख्ने ? के त्यो प्लेटफर्म डिजिटल समाज हुनसक्छ ? सकारात्मक कामबाट पनि भाइरल हुने कि ?!